मनाङलाई छैटौं पटक आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि - Kheladi News Kheladi News
मनाङलाई छैटौं पटक आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि
चैत्र १ गते २०७६ मा प्रकाशित
पोखरा(खेलाडी न्युज)-पेनाल्टी सुटआउटमा नेपाल पुलिस एक पटक अभागी हुदाँ मनाङ मस्र्याङ्दी क्लवले पोखरामा शनिबार सम्पन्न आहा ! रारा गोल्डकपको छैटौ पटक उचाल्दै किर्तिमान बनाएको छ । पुलिससँगै ५ पटक जितेको मनाङ मस्र्याङ्दी क्लवले छैटौं पटक उपाधि उचाल्दै इतिहास लेखाउँदा पुलिसले उपविजेतामा चित्त बुझायो ।
१८ औ आहा रारा गोल्डकप
पोखरा १ चैत्र । पोखरामा जारी १८ औ संस्करणको आहा रारा कपको उपाधी चुमेसंगै मनाङले किर्तिमानी उपाधी चुम्ने टिममा आफ्नो नाम दर्ता गरेको छ ।
१५ वर्ष पछि फाइनलमा भेट भएको नेपाल पुलिस क्लबलाई तेस्रो पटक समेत फाइनलमा हराउदै ६ पटकको विजेता बन्दै किर्तिमानी कायम गरेको हो । पुलिस पनि ५ पटकको विजेता हो । २०५८ सालमा भएको क्याराभान गोल्डकपलाई समेत जोड्ने हो भने मनाङ र पुलिस ६–६ पटकको विजेता टिम हो ।
मनाङले आहा गोल्डकपको दोस्रो, तेस्रो,दशौँ, चौधौँ, पन्र्धौ संस्करणको विजेता टिम हो भने पुलिस पहिलो, छैटौँ, सातौँ, आठौँ र १६ औँ संस्करणको विजेता टिम हो । भने क्याराभान गोल्डकपको समेत विजेता हुदाँ मनाङ उपविजेता टिम हो ।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पुलिसका अजित भण्डारी घोषित हुदैँ अप्रिला स्कुटर प्राप्त गरे ।प्रतियोगिताको उत्कृट गोलरक्षक मनाङका गोलरक्षक अशोक बराल , उत्कृष्ट डिफेन्डर सुरज विक ,उत्कृष्ट मिडफिल्ड मनाङका नितिन थापा,
उत्कृष्ट फरवार्ड मनाङका अन्जन विष्ट , उत्कृष्ट प्रशिक्षक मनाङकै फुजा टोपे घोषित हुदै नगद १५–१५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।